भारतको सिमा रक्षा गर्दा गर्दै जम्मु-कास्मिरमा अ’स्ता’ए ३० बर्षिय प्रेम केसी मनमा अलिकति दया माया छ भने #RIP लेख्नुहोला ! – Paluwa Khabar
भारतको सिमा रक्षा गर्दा गर्दै जम्मु-कास्मिरमा अ’स्ता’ए ३० बर्षिय प्रेम केसी मनमा अलिकति दया माया छ भने #RIP लेख्नुहोला !
भाद्र २२, २०७८ मंगलबार 29
भारतको सिमा रक्षा गर्दा गर्दै जम्मु-कास्मिरमा अस्ताए ३० बर्षिय प्रेम केसी #RIP लेख्नुहोला
दाङ तुलसीपुर घर भई भारतीय सेनामा कार्यरत एक युवाको आ’//तं//’क’//का//’री ह’//म’//ला//’मा परी मृ’//त्यु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ बेलुवाका ३० वर्षीय प्रेम केसीको आ तं’क’का’री ह म’ला परी मृ //त्यु भएको हो।
जम्मु कास्मिरमा कार्यरत केसीको समूहमाथि शुक्रबार बिहान पाच बजेतिर ह//’म’//ला भएको र अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको मृ //त्यु भएको जानकारी दिइएको छ।
प्रेमका दाजु तुलसी केसीले बिहान नौ बजेतिर भारतीय सेनाले घर परिवारलाई फोन गरी गो’///ली लागेको भनेर खबर दिएको थियो। तर परिवारका सदस्यले उनका साथीहरूलाई बुझ्दा मृ’///त्यु भइसकेको भन्ने जानकारी दिएका थिए। केटिएम दैनिक बाट
भारतको सिमा रक्षाका लागि फेरी एक नेपालीले ज्या///’न गु///’मा///एका छन् । भारतीय सेनामा धेरै नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरुलाई सिमाना रक्षाका लागि भारतले प्रयोग गर्दै आएको छ । भारतीय सेनामा कार्यरत दाङ तुलसीपुरका एक नेपाली युवाको नि//ध//न भएको छ ।
उनी लामो समय देखि भारतीय सेनामा कार्यरत थिए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं। नौ बेलुवाका ३० वर्षीय प्रेम केसीको निधन भएको हो ।भारतीय सेनाले उनलाई सिमानामा गो ‘ली ला’गे’को जानकारी दिएका थिए ।
सेनावाट औपाचारी रुपमा नि//ध//न भएको जानकारी भने दिएको छैन । सेनामै रहेका अन्य नेपालीले भने उनको निधन भइसकेको बताएका थिए । जम्मु कास्मिरमा कार्यरत केसीको समूहमाथि शुक्रबार बिहान पाँच बजेतिर आ ////‘क्र////’म////’ण भएको भारतीय सेनाले परिवारलाई जानकारी गराएको छ ।
उनलाई अस्पताल लैजाँदै गर्दा नि//ध//न भएको बताइएको छ ।जम्मु कास्मिरमा मृ त्यु भएका प्रेम केसी र अर्का एक भारतीय सेनाका जवान उक्त घ//’ट//’ना’मा घा’ई’ते भारतीय सेनाका नायक प्रेम बहादुर खत्री र राइफल मैन सुखबीर सिंहलाई उपचारकालागी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
यी दुवै भारतीय जवानहरुको उपचारकै क्रममा निधन भएको थियो । सीमा मा खटिएका भारतीय सेनाका जवानहरुले पाकिस्तानीहरुको ह म’ला’को ज’वा’फि का’र’र्वा’ही दिने क्रममा यीत दुई भारतीय सेनाको निधन भएको हो । प्रेम बहादुर खत्री र सुखबीर सिंह यी दुवै भारतका वीर सपूत भएको बताईएको छ ।
देशको रक्षा गर्दै गर्दा उनीहरुले दिएको ब///’लि//’दा//’न खेर नजाने बताईएको छ । यस कुराकोलागी देशबासी सधैं नै ऋ’//णी रहने बताईएको छ । भारतीय सेनामा कार्यरत कुनैपनि नेपाली ज्या//न// गएपनि उनीहरुको श//’व नेपाल ल्याउन भने दिइदैन ।
परिवारलाई उतै वोलाएर उनीहरुको अ’///न्ते’///ष्टि गर्ने गरिएको छ । नेपालीहरुले परिवारका सदस्यलाई नेपाल ल्याउन पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
निधन हुने भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूको श’///व नेपालमा ल्याउन दिइनुपर्ने माग भूतपूर्व भारतीय गोर्खाहरूले गरेका छन्। हाल भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाहरूको निधन भए उनीहरूको श///’व भारतमै अन्त्येष्टि गरिदिने चलन रहेको छ।
तर कतिपय मृ’त’क सैनिकका परिवारले नेपालमै ल्याएर आफ्नै संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गर्न चाहने गरेका छन्। भारतले भने मा//’रि’//ने’//ह’//रू///लाई राष्ट्रिय सम्मान दिनुपर्ने भन्दै नेपालबाट मृ’//त’//क//’का परिवारलाई बोलाएर अ’//न्त्ये///’ष्टि गरिदिने गरेको छ।
मा’रि’ने’ह’रू’को अ’न्त्ये’ष्टि’मा भारतीय सेनाले त्यहाँको राष्ट्रिय झण्डा ओडाउनुका साथै सलामी दिने गरेको भूतपूर्व भारतीय गोर्खाहरू बताउँछन्।उनी भन्छन्, “सबैभन्दा ठूलो पी’डा परिवारलाई हुन्छ र उसको परिवारले अ’//न्ति’//म सं//’स्का//’र गर्न नपाउनु भनेको निकै दु///:ख’//दा///’यी कुरा हो।”
“त्यसैले हामीले भारत सरकारलाई यसबारे पटकपटक अनुरोध गरेका छौँ।” केसीका अनुसार भारतीय झण्डा ओडाउने र भारतीय सेनाले सलामी दिनुपर्ने हुँदा नेपालमा गर्दा वि’///रो///’ध हुनसक्ने प्रति भारत सचेत छ।केसी भन्छन्: “ती कार्य गर्दा नेपाली भूमिमा वि’रो’ध हुनसक्छ, त्यसैले नेपाल सरकारले अनुमति दिए हामी श’व नेपालमै पुर्याउने व्यवस्था गरिदिन्छौँ भन्ने खालको कुरा भारत सरकारबाट आएको छ।”
गत बुधवार जम्मू-कश्मीरमा खटिएका भारतीय सेनामा कार्यरत गोरखाका २५ वर्षीय अर्जुन थापामगरको दोहोरो भि//ड///न्त//मा नि//ध///न भएपछि भूतपूर्व भारतीय गोर्खाहरूले माग दोहोर्याएका हुन्। सेवा खबर काठमाडौ बाट
Prevश्रीमान र चार जना छोराछोरी छोडेर आफूभन्दा १३ वर्ष कान्छोसँग बिहे गरेर बिचल्ली(भिडियो हेर्नुहोस्)
Nextअसोज १ देखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्यालय खुल्ने
बर्दियाका शक्तिपिठमा कतै प्रतिबन्ध कतै थामि नसक्नु भिड